Iza moa i Sergio Moro, ilay mpitsara nanameloka an’i Lula ary ho “super”-minisitr’i Jaïr Bolsonaro ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Novambra 2018 13:05 GMT
Sergio Moro nandritra ny valan-dresakaho an'ny mpanao gazety tamin'ny taona 2015 | Saripika : Marcos Oliveira/Agência Senado/CC
Vao nohamafisina fa hitana ny toeran'ny Minisitry ny Fitsarana [fr] amin'ny governemantan'ny filoha voafidy Jaïr Bolsonaro ho avy eo i Sérgio Moro, mpitsara federaly tompon'andraikitra tamin'ny Opération Lava-Jato [fr].
Ny zavatra kely indrindra azo lazaina momba ity Moro ity dia mampiady hevitra izy eo amin'ny vahoaka breziliana, satria izy no sariohatry ny ady amin'ny kolikoly eo imason'ny sasany fa mariky ny fanenjehana feno fitongilanana kosa eo imason'ny hafa tamin'ny fanapahan-keviny tamin'ny maha-mpitsara federaly azy.
Mpianatry ny “Madio tanana”
Ny Opération Lava-Jato [fr], nizotra hatramin'ny taona 2014, dia mitondra mankany amin'ireo fitambaram-pamotorana natao hiadiana amin'ny kolikoly. Ny nanombohany dia tamin'ny famotorana tsikaritra famotsiam-bola tao amin'ny tobin-dasantsy iray tao an-tanànan'i Curitiba, renivohitry ny Fanjakana Paraná, tany atsimon'i Brezila — ka izay no nahatonga ny anarany ho “lava-jato”, “fanasana haingana dia haingana” — ary niafara tamin'ny fahitana fandoavam-bola ambany latabatra nataon'ny orinasa breziliana goavana tamin'ireo mpanao politika sy antoko isan-karazany.
Amin'ny maha-tompontoerana azy tao Lapa faha-13ª azy tao amin'ny Fitsarana Federalin'i Curitiba, dia hita matetika tamin'ny efijery nandritra ireo fotoam-pitsarana be mpitatitra an-gazety momba ilay bemidina (opération) i Sergio Moro. Nilaza ho mpakamamy ilay Opération Mains Propres [fr] (na Bemidina madio tanana), izay nanao famotorana ireo fikambanana mpanolikoly teo amin'ny mpikambana politika italiana nandritra ny taompolo 1990 i Moro ka nampihatra tao amin'ny bemidina Lava-Jato, ireo paikady nataon'ny mpitsara mpanao famotorana Antonio Di Pietro [fr], mpandridra ny famotorana italiana.
Mba ahafahana manetsika ny hevi-bahoaka sy hahazoana fanohanana ilay bemidina, dia niasa akaiky niaraka tamin'ny fampitam-baovao ireo ekipa mpanao famotorana, araka ny nasehon'ny lahatsoratra iray tao amin'ny The Intercept Brasil, tamin'ny alalan'ireo valan-dresaka sy ny famoahana ireo antontan-taratasy avy tao amin'ny famotorana, ary teo ihany koa ny poritsaka anaty tetipanorona torohay tsy tokony avoaka.
Fihetsiketsehana ho fanohanana ny bemidina Lava Jato , teo amin'ny tora-pasika Copacabana, Rio de Janeiro, tamin'ny 4 desambra 2016 | Saripika: Tomaz Silva – Agência Brasil/CC
Ny adihevitra manodidina ny bemidina Lava-Jato
Nahazoan'ny ekipa mpanao famotorana fanohanana manan-danja avy amin'ny mponina breziliana ny paikady famoahana amin'ny fampahalalam-baovao ny fizotra ara-pitsarana ny Lava-Jato. Na izany aza dia niteraka ahiahy sy fiampangana notarihan'ny tombontsoa ara-politika mba hanenjehana fotsiny ny governemanta (notarihan'i Dilma Rousseff tamin'izany fotoana izany) sy ireo politisiana avy amin'ny Antokon'ny Mpiasa (PT) fotsiny ny toe-javatra sasany.
Ny iray amin'ny toe-javatra niteraka adihevitra momba an'i Sergio Moro dia niainga avy amin'ny famoahana ny raki-peon'ny fihainoana resaka an-telefonina natao tamin'ny filohan'ny Repoblika tamin'izany fotoana izany izay tsy iza fa i Dilma Roussef izay nifanaovana tamin'ny filoha teo aloha Luiz Inácio Lula da Silva. Raha ny tokony ho izy dia tsy ara-dalàna ilay fihainoana satria mahatafiditra ny Filohan'ny Repoblika ary tokony ho notanterahan'ny STF (Tribonaly Federaly Faratampony) izay mety ho nanapa-kevitra tamin'ny famoahana na tsia ny torohay azo tamin'izany avy eo. Faharoa, tsy ara-dalana ihany koa ny fandraketana ny resaka, satria heverina ho notontosain'ny polisy federaly izany, nefa efa nanome baiko hampitsahatra ny fihainoana ny mpitsara Sergio Moro tenany.
Toe-draharaha iray hafa mampiady hevitra, dia ny namoahan'ny mpitsara Rogério Favreto tao amin'ny TRF-4 (fitsarana ambaratonga faharoa izay nanatontosana ny fitsarana nampigadra an'i Lula) didim-pitsarana manafaka ny filoha teo aloha [fr]. Tamin'io fotoana io efa tsy mpitsara misahana ny raharaha Lula intsony ny mpitsara Moro, ary tany am-pialantsasatra, ka niverina haingana mba hamoaka hitsivolana mandrisika ny polisy federaly tsy hanaja izany didim-pitsarana izany.
Ary ny vao haingana, tsy ampy herinandro talohan'ny fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana, nomena alalana i Moro hamoaka ny sombim-panendrikendrehana nanomezana valisoa an'i Antônio Palocci, nitranga tamin'ny volana avrily, ary miampanga an'i Lula ho tafiditra amin'ny raharahan-kolikolin'i Petrobrás. Tsy nitondra singa vaovao tamin'ny famotorana ny torohay nomen'ny minisitra teo aloha tamin'ny andron'i Lula ary tsy nisy porofo niaraka taminy. Noho izany antony izany no nitsipahan'ny vondrom-pitsara misahana ny bemidina Lava-Jato tao Paraná ny fanendrikendrehana voalohany nahazoam-balisoa.
Ny minisitera goavana an'i Moro
Hatramin'ny nifidianana an'i Jaïr Bolsonaro, maro tamin'ireo mpanohana ny filoha voafidy no nihevitra fa tokony hanana ny toerany ao amin'ny governemanta vaovao i Sérgio Moro. Ny ampitson'ny fihodinana faharoa tamin'ny fifidianana, namoaka tamin'ny gazety ny fikasan'ny filoha voafidy hanendry an'i Moro ho minisitry ny fitsarana na amin'ny toeran'ny Mpitsara ao amin'ny STF i Gustavo Bebianno, filohan'ny Antoko Sosialy Liberaly (PSL), antokon'i Bolsonaro. Nohamafisin'ny filoha tenany izany vaovao izany nandritra ny antsafa tamin'ny fantsona nasionaly.
Nandritra ny fanambaràna natao tamin'ny gazety [fr], nanamafy i Sérgio Moro ary nanaiky ny fanasana. Tsy maintsy mandao ny maha-mpitsara noho izany ilay mpitsara federaly ary mandao ihany koa ny bemidina Lava-Jato mba handraisany ny toerany manomboka amin'ny janoary 2019.
Nasain'Atoa filoha aho hisahana ny toeran'ny minisitry ny fitsarana sy ny filaminam-bahoaka ao amin'ny governemanta ho avy eo. Taorian'ny fivoriana tsy ofisialy izay nifanakalozan-kevitra ny politika hiomanana ho amin'io toerana io. Tamim-panenenana no nanaovako izany satria tsy maintsy mandao ny 22 taona naha-mpitsara ahy aho. Saingy ny vina hametrahana fandaharanasa goavana hiadiana amin'ny kolikoly sy ny fikambanan-jiolahy, ao anatin'ny fanajana ny Lalampanorenana, ny lalàna sy ny zo, no mahatonga ahy handray izao fanapahan-kevitra izao. Amin'ny fampiharana, midika izany hoe fanamafisana ny fandresena manoloana ny heloka bevava sy ny kolikoly tao anatin'izay taona maromaro izay ary mamafa ny mety ho fiverenana an-dalana ho amin'ny tombontsoan'ny rehetra. Hitohy miaraka amin'ireo mpitsara mendrikaja ao an-toerana ny Bemidina Lava-Jato ao Curitiba. Na izany na tsy izany, ary mba hialàna amin'ny adihevitra tsy misy dikany, manomboka izao aho dia tsy maintsy miala amin'ny fotoam-pitsarana vaovao eo. Hanao valan-dresaka aho amin'ny herinandro hanomezako ny antsipiriany bebe kokoa. Curitiba, 1° novambra 2018.
Araka ny nolazain'i Jair Bolsonaro, Tafiditra ao anatin'ny tetibolan'ny Fitsarana ihany koa ireo avy amin'ny sampan-draharaha hafa, toy ny Filan-kevitra fanarahamaso ny lahasa ara-bola, izay miaraka amin'ny minisiteran'ny toekarena amin'izao fotoana izao, sy ireo rafitra rehetra ao amin'ny minisiteran'ny filaminam-bahoaka, izay natsangan'ny Filoha am-perinasa Michel Temer. Hanana ny fahefana ampy hanondroana izay ho ao amin'ny minsiteran'ny fitsarana i Sérgio Moro, ka tafiditra amin'izany izay ho Tale Jeneralin'ny Polisy Federaly. Andrasana ihany koa ny hampidirana ho eo ambany fahefany ny Minisiteran'ny Fangaharaharana, ny fanarahamaso ny lahasa ara-bola sy ny fitsarana ara-bolan'ny Repoblika, ka mandrafitra ilay efa antsoina hoe “superministère”.
Ny mpitsara Sérgio Moro nandritra ny fametrahana ny vaomieran'ny fanitsiana ny fehezam-pombapomban-dalàna famaizana| Saripka: Lula Marques/Agência PT/CC
Fifandirana manodidina ny fanendrena
Tahaka ny anjara toerany tamin'ny fitarihana ny bemidina Lava-Jato, nampisara-kevitra ihany koa ny fanendrena an'i Moro. Ny mpanohana ny filoha voafidy mihevitra fa marika fanamafisana orina sy fananganan-drafitra ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny firenena izao fanendrena izao. Etsy andaniny, ny mpitsikera miampanga fa izao no fanamarinana ny fitongilanan'asan'i Sérgio Moro tamin'ny fitarihana ny bemidina Lava-Jato.
Ity mpitsara ity no tompon'andraikitra mivantana tamin'ny fanamelohana sy ny fanagadrana ny Filoha teo aloha Lula, “favori” tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena, tao anatin'ny fombafombam-pitsarana voamariky ny tranga miteraka fifandirana. Ankoatra izany, ny poritsaka vaovao tsy famoaka tamin'ny fotoana saropady sasantsasany no tena nanimba ara-politika ny Antokon'ny Mpiasa, hadisoana izay nanome vahana ny fanentanan'i Bolsonaro.
Tamin'ny fanehoan-kevitra izao fanendrena izao, nitsikera ilay mpitsara i Ciro Gomes, governora teo aloha tao Ceará sady kandidà ho filoha:
Hitako fa mpitsara ara-politika i Moro, mpanao politika. Noho izany, tena tsara kokoa raha ao amin'ny minisitera izy fa tsy ao amin'ny Tribonaly Faratampony. Tokony hanaiky haingana izay lafiny maha-politika azy izay izy. Feno ny fahaizany manao politika. Fa raha miaraka amin'ny akanjo mahampitsara izany dia lasa mihoa-pampana.
Taorian'ny fanendrena, nanambara tamin'ny mpanao gazety i Hamilton Mourão, filoha-lefitra voafidy, fa efa nisy nandritra ny fanentanam-pifidianana ny fihaonana voalohany tamin'i Moro. Toa mampihevitra izany torohay izany fa raha navelany hiporitsaka ny torohay mampahadiso ny firotsahan-kofidian'ny Antokon'ny Mpiasa, nandritra ny herinandro farany mialoha ny fifidianana, dia efa nahafantatra ny mety ho fandraisany anjara ao amin'ny governemantan'i Bolsonaro izy.